Ifektri Yemikhiqizo, Abahlinzeki - Abakhiqizi bemikhiqizo baseChina
1325 ezine spindle ngomugqa ...
Inqubo emine yezomnotho R4 wo ...
Idizayini entsha i-ATC spindle ...
Imboni Yefenisha Yokhuni: I-Wave Plate, iphethini enhle, ifenisha yasendulo, umnyango wamapulangwe, isikebhe sokwenza umsebenzi wobuciko, amasango enhlanganisela, amakhabethe, iminyango yangaphakathi, imilenze kasofa, amabhodi amakhulu nokunye. Umkhakha Wokukhangisa: ukukhonjwa kokukhangisa, ukububula, ukufakwa kwe-Aconic nokusika, ukwenza amagama we-crystal, ukubumba i-blaster, nezinye izinto zokukhangisa ezenziwe.
Lo mshini wokubopha izinkuni we-cnc usetshenziselwa ikakhulukazi ukusika izinkuni nokubaza. Akukona nje kuphela ukuthi kukhiqize imikhiqizo ehlukahlukene eflat 2d nayo ingakhiqiza imikhiqizo eyi-3d. Ngoba umshini wethu wokwenza izinkuni ungahlukaniswa waba yimishini engu-3 ye-eksisi neye-4 eksisi, ungahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokukhiqiza zamakhasimende. Amamitha amathathu ubude besisindo esindayo, i-gantry iyisakhiwo sensimbi. Ngakho-ke umshini uzinza kakhulu lapho usebenza. Ithebula lingathwala isisindo esiningi, Lokhu kuthuthukisa ukuqina kuphela kepha futhi nokunemba.
Umshini we-6090 mini wood cnc router
Lolu chungechunge lwamamodeli lunamandla ekusebenzeni, kulula ukulusebenzisa, luhlala isikhathi eside futhi luthembekile, futhi lusetshenziswa kabanzi ekucutshungweni nasekukhiqizweni kwezimpawu ezahlukahlukene zokukhangisa, ama-nameplates, amabheji, uphawu, izimpawu, amamodeli wokwakha, amapaneli ezinsimbi, imikhiqizo eyenziwe ngokhuni neminye imikhiqizo Zingaqoshwa ezinamathelini, ithusi, i-aluminium, insimbi yepulasitiki noma ngezinto ezingezimbi zensimbi.
Umnyango wekhabethe uyimbili-inhloso. Kumakhabethe amancane naphakathi nendawo kanye nezitshalo zokuhlanza ikhabethe, umphumela ungaphakathi, futhi ukusebenza kahle kwemishini akukuphakeme kakhulu. Lokhu ngeke kuthuthukise ukusetshenziswa kwemishini kuphela, kepha futhi kugweme ubungozi bokuthenga imishini ngamanani aphezulu. Futhi inzuzo yokucubungula ipaneli lomnyango wedwa ukuthi ungalawula ikhwalithi yokufaka nokucubungula isikhathi ngokwakho.
1212 ukukhangisa kwe-cnc router mahcine
Ibanga lokulungiswa kwesivinini kwemoto ebhaliwe ekhanda. Uhla lokulungiswa kwesivinini ejwayelekile luyizinkulungwane ezimbalwa ukuya ku-30,000 zokuguqulwa ngomzuzu. Uma ijubane lingaguquki noma uhla lokulungiswa kwejubane lincane, khona-ke ibanga lohlelo lokusebenza lomshini wokuqopha lilinganiselwe kakhulu ngoba izinto ezihlukile kufanele zibhalwe kusetshenziswa isivinini sekhanda esihlukile.
Umshini wokusika kanye wokuvula okuzenzakalelayo wezinhlelo ezine wenzelwe amakhasimende ukuba athuthukise ukusebenza kwawo kahle. Amakhanda amane alawulwa amasilinda futhi angashintshwa ngokunqunyelwe, angaqedela kalula izinhlelo ezinhlobonhlobo eziklanyelwe ikhasimende (ukucubungula izinto zokusebenza kudinga ushintsho lwamathuluzi ngaphakathi kwamathuluzi we-2-4), Okusindisa ushintsho lwommese oludidayo phakathi nendawo futhi ilungele imikhiqizo yezinqubo ezahlukahlukene ekwakhiweni kweminyango yokhuni, ifenisha kanye nezinsimbi zomculo.
Ukusika, ukubeka phansi, ukubhoboza, ukubaza (ukwenza imodeli elula). Lezi zinqubo ezine zingasetshenziselwa ukusika kwamakhabhine kanye nokwakhiwa komnyango wekhabethe. Isebenzisa uhlelo olusha lokushintsha amathuluzi oluzenzakalelayo, uhlelo luzenza ngokuzenzakalelayo izidingo zokucubungula ngaphandle kokungenelela kwencwadi. Ama-spindles amaningi asebenza ngasikhathi sinye, enza ngcono ukusebenza kahle kokusebenza.
Ifenisha yebhodi, amakhabethe, amakhabethe, ifenisha yasendlini, ifenisha yangokwezifiso.Ikhabethe elingagcinwe lapho lizibeka endaweni yesikhundla sekhabethe lizibeka esimweni sesinye, isikhundla, ideski, ifenisha yohlobo lwebhodi, ifenisha yasehhovisi, ibhokisi lezinkuni, izinto zasekhishini zokhuni kanye nempahla yokusebenza ubukhulu be-wave board board, umnyango wekhabethe, umnyango wezikebhe wezandla, umnyango we-wenqi, isikrini sokugoqa, inqubo yokugaya iwindows.
Ukwelashwa okugugile okungama-3.6 m obukhulu bokubopha insimbi enkulu (ingxenye ngayinye yomshini wokulalisa umbhede nengxenye yombhede kusetshenzwe ngomshini wokugaya ongaphansi kwezigidi ezi-2 wemishini eyi-CNC, kanti izimbobo zombhede embhedeni zishayelwa idatha ephezulu kakhulu. indawo yokusebenza, ngokunemba okuphezulu komshini). Umshini wemukela ezimbili zamathuluzi we-HQD wokupholisa umoya we-6KW ophakeme we-automation enamandla we-Changsheng, kanye ne-HQD supercharged maalum ekhethekile yokushayela i-5 + 4 CNC (ukushayela ngesivinini esikhulu, ukushayela akuphindanga).
Esetshenziselwa kakhulu ukusika ipuleti esindayo, ukumba, ukugaya, ukusiza nokunye ukucubungula, ifenisha eyenziwe ngokhuni, okulalelwayo, iminyango eqinile yokhuni, iminyango yopende, iminyango egxilikayo, amakhabethe, amathuluzi kaBuddha, bamboo nezandla zokhuni, amathayela wetiyi, ipulasitiki, ukulungiswa kwamabhodi , Izikrini, ama-grilles wewindi, ozimele bezithombe, umhlobiso, imikhiqizo yezinkuni, imidwebo ye-3D, ukumba, ukusika izinsiza, njll.